जापान पुगेपछि कार्यक्रम स्थलमा किन जान दिइएन ‘फुलन्देकी आमा’ लाई, किन विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइयो ? – दैनिक नेपाल न्युज
जापान पुगेपछि कार्यक्रम स्थलमा किन जान दिइएन ‘फुलन्देकी आमा’ लाई, किन विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइयो ?
काठमाडौँ । पछिले समय औधी चर्चामा रहेका कलाकार हुन् उमेश राई उर्फ फलन्देकी आमा । चर्चित कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लबका सबैभन्दा बढी रुचाइएका यि कलाकार साउन १६ गते रोधी साँझ कार्यक्रमको लागि जापान उडेर पनि नेपाल फर्काइएको छ ।
तमु धिं जापानको रजत महोत्सवको अवसर पारेर आयोजना गरिएको २३ औ रोधी साँझ कार्यक्रमको लागि उमेश राई र लोकगायिका सबिना गुरुङ एकसाथ बिहिबार जापान उडेर त्यहाँको विबानस्थलमा पुगेपछि पनि फर्काइएको आयोजकले जनाएको छ ।
विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा भएको चेकजाँचमा प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै उनीहरु दुवैलाई प्रवेशाज्ञा नदिएको बताएको छ । तमु धिं जापानले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस कुराको जानकारी दिँदै उनीहरु फर्किनु निकै नै दुखद कुरा भएको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा सो कार्यक्रम भने सोही समयमा नै हुने उल्लेख छ ।